हाम्रो विकास बैंकको २००% हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने आवेदन भर्न ?
ARCHIVE, CORPORATE » हाम्रो विकास बैंकको २००% हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने आवेदन भर्न ?
काठमाडौं - जेठ ७ गतेदेखि हाम्रो विकास बैंकले २००% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले १ः२ अनुपतामा सेयर बिक्री खुला गर्न लागेको हो । यसआधारमा बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य निर्धारण गरेको छ । बैंकले ३० लाख ५८ हजार ३३८.७५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । यो हकप्रद असार ११ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । वैशाख १० गते सम्मकायम रहेका सेयरधनीले मात्र यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।